Isikhumba Original Case-pocket Isikhumba Pocket esikhwameni for BlackBerry 9360 / 9370 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Isikhumba Pocket Yenziwe eliphezulu okuqotho nge surface esithambile nice. Ikakhulukazi ngoba design 9360/9370 Classic kwahambisana: the front okuyingxenye it has a ukuthungwa smooth, emuva — ribbed. Lokhu imininingwane uyanezela charm ekhethekile omele, cover of the ephaketheni kuwenze eyingqayizivele.
Case-pocket ihlanganisa cishe ngokuphelele smartphone, ukuyivikela zonke izinhlobo yokulimala. Ukuze ukhiphe idivayisi, uzodinga kancane donsa phezulu kwalo, kulula ukwenza, sibonga phambi elifushane surface kancane.
Leli cala isekela ubuchwepheshe magnetic owaziwa, okusho othomathikhi ukuvala isikrini. Ukusebenzisa le-accessory, wena Ukulondoloza amandla ebhethri futhi kuvimbele ngengozi ngokucindezela. Ngokushesha nje lapho ukhipha smart phone, isikrini futhi usuvule ngokuzenzakalelayo, futhi umshini ungasebenza imodi evamile. Ngaphezu kwalokho elula kakhulu, okuyizinto idume nesembozo original — uzame!
Phawula izinketho lowehlukile for nesembozo, nakanjani uthole yakho, bheka gallery photo.
White (mbala omhlophe)
White / Purple (White / Purple)
Isikhumba Original Case-pocket Isikhumba Pocket esikhwameni for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Black (Black) ACC-39404-301 (HDW-39397-001) ●
Isikhumba Original Case-pocket Isikhumba Pocket esikhwameni for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, White (mbala omhlophe) ACC-39404-302 (HDW-39397-002) ●
Isikhumba Original Case-pocket Isikhumba Pocket esikhwameni for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, White / Purple (White / Purple) ACC-43296-302 ●
Isikhumba Original Case-pocket Isikhumba Pocket esikhwameni for BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Black / Blue (Sky Blue) ACC-43296-301 (HDW-40289-001) ●
Black (Black) ACC-39404-301 (HDW-39397-001)
White (mbala omhlophe) ACC-39404-302 (HDW-39397-002)
White / Purple (White / Purple) ACC-43296-302